महिला बचतको १९ औँ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १७, २०७४ समय: १०:०६:५४
इटहरी । महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था इटहरीको १९ औँ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । इटहरी र आसपासका क्षेत्रमा फैलिएको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आबद्ध चार हजार ३ सय १९ जना सेयर सदस्य सङ्ख्या रहेको छ भने सहकारीको शेयर पुजी रु ४,४३,८४,९०० रहेको निक्षेपमा २२,६९,९०,१३६÷५० रहेको जानकारी दिएको छ ।
इटहरी उपमहानगर पालिकाको प्रमुख द्धवारीकलाल चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न साधारणसभामा उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम ,राष्ट्रिय सहकारी संघका लेखा समिती सदस्य सोमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले कार्यक्रममा आ आफ्ना धाराणा राखेका थिए । उक्त कार्यक्रममा सहकारीका अध्यक्ष अमृता सुब्बाले सस्थाको गतिविधी तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्तुतत गर्नु भएको थियो ।
आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष सुब्बाले अहिलेसम्म आइपुग्दा संस्थाले यस वर्षको लागी रू. २२,६९,८० ,४५५÷०० ऋण लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसैगरी संस्थाले रू. ४,१३,९५,४३÷१९ ब्याज असुली गरेको छ । त्यस्तै संस्थाले आफ्ना सेयर सदस्यको आर्थिक उन्नयनका लागि रू. २७ करोड ४५ लाख ७७ हजार १ सय ५६लगानीमा रहेको तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरेको छ ।